WTE AFFILIATE PROGRAM ကို - World Trade Exchange
အဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ရည်ညွှန်းကိုးကားပါ၊ ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံအထိရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရည်ညွှန်းထားသည့်ဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင် ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၁၀ ဒေါ်လာအထိ Affiliate / လွှဲပြောင်းခများကိုပေးဆောင်သည် wte!
ဖောက်သည်များကို ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရည်ညွှန်းခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျှမပြုလုပ်ဘဲဒေါ်လာ ၄၀ မီလျံအထိသင်လုပ်နိုင်သည် WTE အဖှဲ့ဝငျအဖွစျ at https://worldtradeexchange.org / ။ သင်လုပ်ရမှာကမိတ်ဆက်ခြင်းပဲ WTE အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံသင်၏ဆက်နွယ်မှု link ကိုပေးပို့ပါ WTE အဖွဲ့ဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းတွင်အလုပ်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလိုအပ်ပါ။
ဘာလို့ပူးပေါင်းတာလဲ wte ပရိုဂရမျ?
သင်ရည်ညွှန်းထားသောဖောက်သည်တစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၄၀ အထိရနိုင်သည် wte!
WTE ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့ဝင်များကိုထူးကဲသောအောင်မြင်မှုများ၊ အဖြေများနှင့်ရလဒ်များကိုပေးအပ်သောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လခအများဆုံးဝင်ငွေရသောအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖွဲ့အစည်းများသည်ကမ္ဘာ့အရှုပ်ထွေးဆုံးဘဏ္financialာရေးပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်း ၀ င်များကိုမဖြစ်နိုင်သည့်ပန်းတိုင်များနှင့်အောင်မြင်မှုများရရှိရန်ကူညီသည်။
လစာအများဆုံးပေးရသောအဖွဲ့ ၀ င်အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအဖွဲ့များကိုရက်ရက်ရောရောဆု ချ၍ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးပေးချေသည့်တွဲဖက် / လွှဲပြောင်းမှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
မင်းရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဝင်ငွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ၂၄/၇ ကိုအလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုသောသင်၏တွဲဖက်ကော်မရှင်ကိုသင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့နေ့စဉ်ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်စနစ်သည်သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများမှငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပေးပြီးသင်၏ကော်မရှင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးသည်။ ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကိုသင်၏ဘဏ်စာရင်းသို့အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းပါသည်။ နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်ငွေရရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိပါ။
သင်ကိုးကားမည့်မည်သည့်လိုင်းအတွက်မဆိုသင်ဒေါ်လာ ၅ မီလီယံကူပွန်ကိုသင်ရလိမ့်မည် WTE!
သင်မည်သူမဆိုဖိတ်ကြားတဲ့အခါမှာ WTEနှင့်ဖိတ်ကြားသူအဘို့အ sign up ကို WTE အသင်း ၀ င်လျှင်သင် $ 5M ကူပွန်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ဖိတ်ကြားသူသည် $ 5M ကူပွန်နှင့်အားလုံးလက်ခံရရှိလိမ့်မည် WTE အသင်း ၀ င်အကျိုးခံစားခွင့်များကို https://worldtradeexchange.org/ တွင်ရရှိနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: ဤကမ်းလှမ်းချက်သည်ယခုလပထမ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ၁၀၀ ကိုရည်ညွှန်းသောတွဲဖက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ သင် join ဖို့ကိုရည်ညွှန်း client ကိုလျှင် WTE join ဖို့ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည် 100 အကြားဖြစ်ပါတယ် WTE ယခုလအတွက်သင်နှင့်သင်၏ရည်ညွှန်းချက်သည် $ 5M ကူပွန်တစ်ခုစီရရှိမည်ဖြစ်သည်။
WTE အသင်း ၀ င်မှုသည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်များပြီးတောနက်ကဲ့သို့ရောင်းသည်
မည်သည့်တွဲဖက်အစီအစဉ်နှင့်မဆိုအောင်မြင်ရန်သင်၏မြှင့်တင်ရေးထုတ်ကုန်သည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်လိုအပ်သည်။
WTE အသင်း ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အလွန်တရာ ၀ ယ်လိုအားအလွန်များပြီးတောမီးများကဲ့သို့ရောင်းချသည်။
WTE စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုအကျိုးအမြတ်ကင်းလွတ်စွာကုန်သွယ်မှုအကြွေးမည်မျှရရှိနိုင်စေကာ၊ အရောင်း ၀ င်ငွေသေချာစေရန်၊ သိုလှောင်ရုံအမျိုးအစားအားလုံးကိုရောင်းချခြင်း၊ အကြွေးလုံးဝမပေးဆပ်ခြင်း၊ ၀ င်ငွေ ၁၀,၀၀၀% တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုကူညီသည့်တစ်ခုတည်းသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ၉၀% အထိလျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအလျင်အမြန်ရချင်ရင်၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး passive ဝင်ငွေရစေတဲ့စီးပွားရေးနှင့်အတူ "rich rich" အနားယူချင်တယ်ဆိုရင် - လစဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုမင်းအတွက်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်၊ WTE ယနေ့ Affiliate အစီအစဉ်ကို။
အဆိုပါ WTE တွဲဖက်ပရိုဂရမ်သည်အလွယ်တကူချမ်းသာနိုင်သောစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်အလျင်အမြန်ချမ်းသာလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissueနာရှိပါကဤအချက်ကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးသင်၏ကြွယ်ဝသော - နှေးကွေးသောဘဝအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ချမ်းသာသောနှေးနှေးတွဲဖက်သည့်အစီအစဉ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
စာဖတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုမီမိမိကိုယ်ကိုမှန်ထဲကြည့်ပြီး“ သင်ကြွယ်ဝတဲ့နှေးနှေးချဉ်းကပ်မှုနဲ့ဘယ်လိုဝေးဝေးနေတာလဲ။ ”
ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်မှုအစီအစဉ်သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသော၊ ကတိကဝတ်ပြုမှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုလုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စေရန်တွန်းအားပေးပြီးငွေကြေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးရရှိရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူအတွက်ဖြစ်သည်။
သင်သည် $ 2m GIFT တစ်ခုရရှိမည်။
အဆိုပါများအတွက်အခကြေးငွေ WTE ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် $ 2M ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ် WTE Affiliate, သင်တစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် WTE မည်သည့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်။ ဒါက $ 2M ပါ WTE အသင်းဝင်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည် WTE တွဲဖက်။
တစ်ဦးအဖြစ် WTE ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်, WTE သင့်အားအတိုးမဲ့ချေးငွေဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်သုညကုန်ကျငွေပေးမည်၊ သင့်ကိုယ်စားရောင်းအားဒေါ်လာ ၅၀ မီလီယံ၊ သင်၏သိုလှောင်ထားရာဒေါ်လာ ၅၀ မီလီယံအထိရောင်းမည်၊ သင်၏ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၅၀ အထိသုညကုန်ကျမည်။ သင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀၀% တိုး။ သင့်ကိုယ်စား ၀ ယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ဒေါ်လာ ၅၀ မီလျံရှိသည်။ ထို့အပြင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများ။
သင့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည်ငါး ဦး ကိုရည်ညွှန်းပြီးနောက်, WTE သင့်အားအခမဲ့ပေးမည့် Premium အသင်း ၀ င်မှုကိုအလိုအလျောက်ပေးလိမ့်မည်။
၏အကျိုးကျေးဇူးများ WTE အဖှဲ့ဝငျအဖွစျ
နှစ်ထပ် ကော်မရှင်များနှင့်တစ်သက်တာ ၀ င်ငွေများ
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ရဲ့ Affiliate link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်လစာအတွက် sign up လုပ်တဲ့အခါ WTE အသင်းဝင်အကောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ, သင်သည်သူတို့၏အသင်းဝင်အခကြေးငွေ၏ 20% ရ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ Premium အသင်းဝင်ဖို့စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင်သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ ရမယ်။ ထို့အပြင်သင်သည်သင်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်သက်တာအတွက်သင်၏ရည်ညွှန်း၏ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေများမှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထပ်တလဲလဲဝင်ငွေရရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်ရည်ညွှန်းသည့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုအားလုံးအတွက်ကော်မရှင် ၂၀% ၀ င်ငွေအပြင်သင်ယူဆောင်လာသည့်တွဲဖက်ရောင်းဝယ်မှုများ၏ ၁၀% ကော်မရှင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာအခြားသူသည်ရောင်းသူဖြစ်ပြီးသင်ကော်မရှင်ကိုထပ်ခါတလဲလဲရနိုင်သည်။ client တစ်ခုပူးပေါင်းသောအခါ WTE သင့်ရဲ့ Affiliate link ကိုမှတဆင့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ် ဘဝအဘို့သင့်အကောင့်အောက်မှာခြေရာခံ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အသင်း ၀ င်တစ်သက်တာလုံးအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များအပါအ ၀ င်ထပ်တလဲလဲရောင်းအားများအတွက်ကော်မရှင်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးဖြစ်လာ wte အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ကော်မရှင် ၄၅% ၀ င်ငွေရရှိရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံ GIFT ရယူပါ။
+ အသစ်သော Rolls Royce Phantom ကားများသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုများပြားသည့်မည်သည့်ကားမဆို GET!
မင်းလုပ်နိုင်တယ် WTE အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးရက် ၃၀ အတွင်း $ 45M ကော်မရှင်တစ်ခုမှဝင်ငွေဖြင့်သင်၏လွှဲပြောင်းမှုအားလုံး၏ ၄၅% အထိစတင်စတင်ပါ။
တစ်ဦးအဖြစ် WTE အကြီးတန်းမိတ်ဖက်, သင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် WTE မည်သည့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့ဝင်။ အဘို့အအခကြေးငွေ WTE ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့ဝင် $ 100M ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက $ 100M WTE အသင်းဝင်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေဖြင့်သင်ဝင်ငွေရရှိရန်အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည် WTE တွဲဖက်။
တစ်ဦးအဖြစ် WTE အဖွဲ့ ၀ င်၊ WTE သင့်အားအတိုးမဲ့ချေးငွေဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကိုသင့်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်၊ သင့်ကိုယ်စားရောင်းအားဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံရရှိမည်၊ သင်၏သိုလှောင်ထားရာဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံအထိရောင်းမည်၊ သင်၏ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကိုနဂိုကုန်ကျမည်။ သင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀၀% တိုး။ သင့်ကိုယ်စား ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျံတန်ပါစေ။ ထို့အပြင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများ။
ရရှိရန်အပိုဆုအဖြစ် WTE အကြီးတန်းမိတ်ဖက်အနေအထား, WTE သင့်အား Rolls-Royce Phantom 2020 အသစ်သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောအခြားဇိမ်ခံကားအသစ်တစ်ခုကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
ဤပရိုဂရမ်၏အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်ငွေပမာဏကိုရယူပါ။
အခြားတွဲဖက်များနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည် WTE တွဲဖက်ပရိုဂရမ်နှင့်သင့်လက်အောက်တွင်စာရင်းသွင်းထားသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ငွေသားအပိုဆုကြေးကိုလက်ခံရရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်တွဲဖက် ၂၅၀ ကိုရည်ညွှန်းလျှင်ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ အပိုဆုကြေးကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်ရည်ညွှန်းထားသောတွဲဖက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ တန်အပိုဆုကြေးအပြင်သင်ရည်ညွှန်းထားသောတွဲဖက်ကုမ္ပဏီများမှဖောက်သည်ရောင်းအား ၁၀% ကိုလည်းသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရမည်မှာ Affiliate Account သည်ငွေပေးချေသောဖောက်သည်လွှဲပြောင်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တက်ကြွသောအကောင့်တစ်ခုအနေဖြင့်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရည်ညွှန်းထားသည့် Affiliate အတွက်ငွေသားပေးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Affiliate သည်အနည်းဆုံးပေးရသောဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းထားသောတွဲဖက်ငွေအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ သာပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေသည် Affiliates များအားသူတို့၏အကောင့်များအောက်ရှိအယောင်ဆောင်ထားသော Affiliate Account များကိုစာရင်းသွင်းခြင်းမှတားဆီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပေါ်အခြေခံပြီးလိုက်ဖက်တဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အစစ်အမှန်အချိန်ခြေရာခံခြင်း စံနစ်
သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီခြေရာခံစနစ်နှင့်သင်၏တွဲဖက်အကောင့်တွင် WTE တွဲဖက်ပရိုဂရမ်သည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ သင်၏တွဲဖက်အကောင့်ဒိုင်ခွက်မှသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည် သင့်ရဲ့တွဲဖက် link ကိုအမြင်များ, လည်ပတ်မှုများ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း, ရည်ညွှန်း sign-ups, ပေးချေမှု, အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနည်းစနစ်များကမည်ကဲ့သို့အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်ထုံးစံစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအပါအ ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်ပျက်နေသည်။
သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်၏ dashboard မှတစ်ဆင့်အသေးစိတ်စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများကိုရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့မှာ cookie ကြာချိန် 1,825 ရက်သို့မဟုတ်5နှစ်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုယနေ့ရည်ညွှန်းပြီးသူတို့ပူးပေါင်းပါကဆိုလိုသည် WTE လာမယ့် ၅ နှစ်အတွင်းမှာမင်းကိုရောင်းဖို့အသိအမှတ်ပြုမှာပါ။ အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏ပထမဆုံးလည်ပတ်မှုတွင် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါကသင်၏လွှဲပြောင်းမှုကို ၅ နှစ်ကြာခြေရာခံလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြားချိတ်ဆက်မှုပရိုဂရမ်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည် ရက် ၃၀ မှ ၉၀ အတွင်း cookie ကြာချိန်ကိုခြေရာခံသည်။
သင့်အားကုန်ပစ္စည်းဆိုင်ရာမေးခွန်းများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပစ္စည်းများနှင့်သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်အခြားအရာများဖြင့်သင့်အားကူညီပေးရန်အတွက်သီးသန့်တွဲဖက်ထားသောမန်နေဂျာတစ် ဦး ရှိသည်။
ဘာကြောင့်ရည်ညွှန်းတာလဲ WTE သင့်ပရိသတ်ကို \_ t
ဘာလုပ်လဲ wte ပူဇော်?
WTE အဖွဲ့ဝင်များကိုထူးကဲသောအကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ရလဒ်များကိုပေးသည်။ WTE အသင်းဝင်များကိုမဖြစ်နိုင်ပုံပေါက်သည့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နှင့်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အောင်မြင်မှုများရရှိရန်ကူညီသည်။ ရလဒ်များကိုရရှိရန်သင့်ဘက်မှအားစိုက်မှု၊ အချိန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်မရှိပါ။ WTE သင်၏ကိုယ်စားရာနှုန်းပြည့်အလုပ်ကိုလုပ်သည်။ WTE အောက်ပါရလဒ်များကိုရရှိရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်။
၂၄ နာရီအတွင်းအတိုးမဲ့ချေးငွေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံကိုရယူပါ။
ရက် ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေကို ၁၀၀X ဖြင့်မြှောက်ပါ။
သင်၏ဝယ်ယူမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးအတွက် ၉၀% လျှော့စျေးကိုရယူပါ။
ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းအရောင်း ၀ င်ငွေတိုးမြှင့်မှု ၁၀,၀၀၀% တိုးလာစေမည်
အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် 0% အတိုးနှုန်းကိုရယူပါ။
ထုတ်ကုန်များကို ၂၄ နာရီအတွင်းရောင်းချပါ။
ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းငွေသားအသုံးစရိတ်များကို ၉၀% လျှော့ချပါ။
အမြတ် 100% မှာလည်ပတ်။
၂၄။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် ၀ ယ်ယူသည့်ရင်းမြစ်များကိုရှာပါ။
25. Circumvent စျေးနှင့်လဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှု။
၂၆။ ခက်ခဲသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း။
၃၁။ လေယာဉ်ကို ၉၀% လျှော့စျေးဖြင့်ဝယ်ယူပါ။
၃၂။ ၉၀% လျှော့စျေးနှင့် Jet Fuel ဝယ်ပါ။
၃၄။ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ၉၀% လျှော့စျေးဖြင့်ရယူပါ။
၂၈ နာရီအတွင်းစျေးနှုန်းသင့်ကုမ္ပဏီကို ၀ ယ်ပါ
အဆင့် ၁ ။
အခမဲ့ AFFILIATE အကောင့်တစ်ခုသို့ sign up လုပ်ပါ
အခမဲ့ sign up လုပ်ပါ WTE Affiliate အကောင့်။ တွဲဖက်စာရင်းသွင်းရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမအခကြေးငွေလိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်အတည်ပြုချက်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ။ သင်တစ် ဦး Affiliate အကောင့် sign up ကိုပြီးတာနဲ့သင်ချက်ချင်းမြှင့်တင်ရန်စတင်နိုင်အောင်, သင်သည်သင်၏ Affiliate dashboard ကိုသို့အလိုအလျှောက် logged လိမ့်မည်။
သင်၏တွဲဖက်အကောင့်ဒိုင်ခွက်တွင်သင်“ မြှင့်တင်ရန်” သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်“ OFFERS” tab အောက်ရှိတွဲဖက်လင့်ခ်များနှင့်အကြောင်းအရာများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ WTE အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်။
သင်၏ပရိသတ်၊ ဖောက်သည်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ နောက်လိုက်များ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကွန်ယက်များကိုဝေမျှရန်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့်တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုကူးယူရန်သင်၏တွဲဖက်အကောင့်သို့လော့ဂ်အင်လုပ်ပါ။
မြှင့်တင်ရန် wte န်ဆောင်မှု
မြှင့်တင်စတင်ပါ WTE အဆိုပါမျှဝေခြင်းအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အကြောင်းအရာ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ဖန်တီးမှုများကို“ OFFERS” tab အောက်ရှိ သင့်ရဲ့တွဲဖက်အကောင့်ထဲမှာ သင်၏ပရိသတ်၊ ဖောက်သည်များ၊ ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဆွေများ၊ နောက်လိုက်များ၊ ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ကွန်ယက်များ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ရဲ့ Affiliate link ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာ sign up ကိုအခါ WTE အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လျှင်သင်သည်သူတို့၏အသင်းဝင်ကြေး၏ ၂၀% ကိုရလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူတို့သည်ဒေါ်လာ ၂ မီလီယံပရီမီယံအသင်း ၀ င်ရန်စာရင်းသွင်းလျှင်သင်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ ရလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်သင်သည်သင်၏အဖွဲ့ဝင်များ၏တစ်သက်တာအတွက်သင်၏လွှဲပြောင်း၏ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေများမှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောထပ်တလဲလဲဝင်ငွေရရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်ရည်ညွှန်းသည့်တိုက်ရိုက်ရောင်းအားအားလုံးအတွက်ကော်မရှင် ၂၀% ၀ င်ငွေအပြင်သင်ရည်ညွှန်းထားသောတွဲဖက်ကုမ္ပဏီများမှဖောက်သည်ရောင်းရငွေမှ ၁၀% ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ client တစ်ခုပူးပေါင်းသောအခါ WTE သင်၏ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာ link မှတဆင့်အသင်း ၀ င်ခြင်းကိုသင်၏ဘဝအတွက်သင်၏အကောင့်အောက်တွင်ခြေရာခံလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အသင်း ၀ င်တစ်သက်တာလုံးအတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်များအပါအ ၀ င်ထပ်တလဲလဲရောင်းအားများအတွက်ကော်မရှင်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ရည်ညွှန်းမှုများမှငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏ပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပေးပြီးထိုနေ့တွင်ပင်သင်၏ကော်မရှင်သည်သင်၏ဘဏ်အကောင့်သို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကိုသင်၏ဘဏ်စာရင်းသို့အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်နေ့စဉ်ကော်မရှင်ပေးငွေများသည်သင့်အားနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေးချေမှုကိုသေချာစေသည်။
သင်၏ပရိုမိုးရှင်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုသင်၏ Affiliate Account dashboard မှတဆင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ သင်၏တွဲဖက်လင့်ခ်၏အမြင်များ၊ လည်ပတ်မှုများ၊ ကလစ်များ၊ အပြောင်းအလဲများ၊ ရည်ညွှန်းထားသောဆိုင်းအင်များ (သင်မည်မျှရည်ညွှန်းသည်)၊ ငွေပေးချေမှု (သင်ရရှိထားသောကော်မရှင်များ) နှင့်အရောင်းအဝယ်များကိုသူတို့အချိန်မှန်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများကိုကြည့်ရန်သင်၏တွဲဖက်ဒိုင်ခွက်ရှိဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ menu ၏ 'TRANSACTION' နှင့် 'REPORTS' tab ကိုနှိပ်ပါ။
FOR sign up လုပ်ပါ WTE Affiliate နဲ့ PROGRAM